महाधिवेशनको अजेण्डाबारे देउवा केही लचिलो - Jhilko
महाधिवेशनको अजेण्डाबारे देउवा केही लचिलो
काठमाडौं । गत आईतबारका लागि बोलाइएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक करिब एक घण्टा चलेर पाँच दिनका लागि स्थगित भएको छ । १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बैठकको अजेण्डा बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा संस्थापन र इतर पक्षबीच गम्भीर मतभेद तथा आरोप/प्रत्यारोप सुरु भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।
प्रस्तावित नियमावलीबारे छलफल, केही भातृ संस्थाहरुको विधान संशोधन, राष्ट्रिय जागरण अभियानबारे समीक्षा लगायत चार वटा अजेण्डाबारे निर्णय गर्ने भन्दै सभापति देउवाले असार २२ गते आईतबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने गरी दुई साताअघि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, इतर पक्षले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई पनि बैठकको अजेण्डा बनाउनु पर्ने माग ग¥यो ।
बैठकका अजेण्डा प्रस्तुत गर्ने संस्थापन पक्षले हो तर विधान अनुसार २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पनि एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सक्छन् । सभापति देउवा १४औं महाधिवेशनको समयतालिकासम्बन्धी अजेण्डा कुनै पनि हालतमा बैठकमा प्रस्तुत नहोस् भन्ने चाहन्थे । त्यसैले उनले आईतबार बिहानै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतलाई बोलाएर वार्ता गरे ।
अल्पमत पक्षद्वारा बेग्लै अजेण्डा प्रस्तुत गरिँदा पार्टीको विवाद छताछुल्ल हुने भन्दै देउवाले १४औं महाधिवेशनको अजेण्डा प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरे । तर, देउवाको आग्रह पौडेललाई स्वीकार्य भएन । त्यसपछि देउवाले दिउँसो पदाधिकारीको बैठक राखे । पदाधिकारीको बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव देउवाको आग्रहप्रति लचिलो भए । तर, पौडेल आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् ।
यो प्रयास गर्दागर्दै साँझ प¥यो । बेलुका साढे ७ बजेदेखि एक घण्टामात्रै चलेर पाँच दिनका लागि बैठक स्थगित भयो । २७ गतेदेखि फेरि बस्ने बैठकमा १४औं महाधिबेशनको अजेण्डाबारे छलफल गर्न सभापति देउवा केही लचिलो भएका छन् । तर, आफ्नो कार्यकाल थप्ने रणनीति अनुसारको मार्ग भने कायमै राखेका छन् ।
बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेका अजेण्डामा इतर पक्षमा माग घुमाउरो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । रिक्त रहेका संगठनहरु निर्माण गरेपछि मात्रै महाधिवेशनको मिति तोक्ने गरी अजेण्डा लगिएको छ । अर्थात् महाधिवेशनको मिति नतोक्ने तर रिक्त संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणलगायत स्थानीय अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने अजेण्डा महामन्त्री खड्काले पेश गरेका छन् । चार वटा अजेण्डाका लागि बैठक बोलाइए पनि इतर पक्षको चर्को दबाबपछि महामन्त्री खड्काले १४ बुँदे एजेण्डा पेश गरेका थिए ।
१४ बुँदे प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा महाअधिवेशनको विषयमा उल्लेख गर्ने सहमति जुटेपछि तत्कालका लागि विवाद साम्य भएको थियो । पहिले संस्थापन पक्षले रिक्त रहेका तहहरुमा अन्तरिम संगठन बनाएपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर, इतर पक्षको अडानपछि जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार कार्यसमिति गठन सँगसँगै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी अजेण्डा थपिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश समिति, पालिका समिति र प्रदेश क्षेत्र निर्वाचन समिति गठन भएकै छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति पनि समायोजन हुन बाँकी छ । गत पुसमै विधान संशोधन गरिएपछि यी समितिहरु गठन गर्ने बाटो खुलेको थियो । तर यी समितिहरु गठन गर्नासाथ १४औं महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाब पर्ने र कार्यकाल थप्ने आफ्नो रणनीति असफल हुने भएकाले सभापति देउवाले आलटाल गरिरहेका छन् ।
इतर पक्षको यो दबाबपछि सभापति देउवाले रिक्त रहेका तहहरुमा समिति गठन गर्न झन् ढिलाइ गर्दै जाने निश्चित देखिएको छ । किन कि अजेण्डाको बुँदा नं २ मा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठनपश्चात् १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा ।’–समयबद्ध साप्ताहिकबाट
हङकङले नेपाललाई ९६ रनको लक्ष्य दियो
नेकपाको एकतामा देखिएको अनेकता
नवलपरासीमा ट्याक्टर दुर्घटनाः चारको ज्यान गयो, १५ घाइते
मृत्यु हुनेमा बर्ष ५० का यमसिहं सारु मगर,बर्ष ३२ का नरबहादुर सुस्लिगं मगर, बर्ष...
नेपाली सैनिक टोलीलाई स्वर्ण पदक
अभ्यासमा बेलायती फौजका १०६ र नेपाल समेत अन्य ३४ देशका गरि कूल १४० सैन्य टोलीहरूको...
मानवताको पक्षमा विश्व समुदाय किन एक हुन नसक्ने ?
कोरोना भाइरस चीनबाट भयो कि कहाँबाट भयो भन्न सकिदैंन तर प्रारम्भमा यसको उत्कर्ष चीनमा...